बुबा गुमा’एपछि प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रो’श पोख्दै कमेडियन आदर्श :– ” कुर्सीमा बसि’रहन तिमीलाई अलिकती पनि ला’ज छैन ?” (भिडियो हे’र्नुहोस्) – Sadhaiko Khabar
बुबा गुमा’एपछि प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रो’श पोख्दै कमेडियन आदर्श :– ” कुर्सीमा बसि’रहन तिमीलाई अलिकती पनि ला’ज छैन ?” (भिडियो हे’र्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८ समय: १९:२४:४०
काठमाडौं / उप’चार नपाएर आफ्नो बुवा गुमा’एका स्ट्याण्ड–अप कमेडियन आदर्श मिश्राले निकै भा’वु क सन्देश जारी गरेका छन् । बुवाको नि’ध न भएको भोलीपल्ट उनले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै अस्प’तालको लापर’वाहीका बारेमा खु’ला सा गरेका छन् । उनले अस्प’ताल र स्वास्थ्य’कर्मीको लापर’वाहीका कारण आफ्ना बुवाले सं’सा र छोड्नु’परेको बताएका छन् ।
मृगौ’ला ख’रा ब भएर फे’र्नका लागि लामो समयदेखि प्रयासरत बुवा विनोद मिश्राको उप’चारका क्रममा उनले आफुले भोगेको पीडा उनले निकै भा’वु क ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । देशको स्वास्थ्य प्रणालीका कारण मानिसको कसरी मृ’त्यु भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले प्रष्ट खुलाएका छन् । पैसाको अभा’वले नभएर देशको स्वास्थ्य प्रणालीका कारण आफ्नो बुवाको नि’ध न भएको उनले बताएका छन् ।
वीरगञ्जस्थित नेशनल मे’डिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालका कारण आफ्ना बुवाको नि’ध न भएको उनको भनाई छ । एनएमसीका सञ्चालक बसरुद्धिन अन्सारी असा’ध्यै शक्ति’शाली व्यक्ति भएको र उनले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौ’ला प्रत्या’रोपणको पैसा तिरेको बताएका छन् । उनै अन्सारीले कलेजको शुल्क र सुविधाको विषयमा प्रश्न उठाउँदा गु’न्डा लगाएर विद्यार्थी कु ट् ने गरेको उहाँको आ’रो प छ ।
नेशनल मेडिकल कलेजबाट बुवालाई नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा भनेका छन्, त्यहाँका नर्सले डाक्टरका अगाडि डाय’लासिस मेसिन ४ घण्टाका लागि सेट गर्ने, तर डाक्टर हिँड्ने बित्तिकै ३ घण्टामा झार्ने सम्म पनि गरे । उनीहरूलाई घर जान हतार थियो होला, तर उनीहरूका कारण आज मेरो बुबा भने घर फर्किन पाउनुभएन ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आ क्रो शित हुँदै भनेका छन्, ” केपी ओलीले कुर्सी छा’डिदिए हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीप्रति आ’क्रो श पो’ख्दै आदर्शले भन्नुभयो, ‘डायला’इसिसका लागि स्कुटरको पछाडि बसेर हप्ताको दुईपटक मेरो बुबा अस्प’ताल गएका हुन्, केपी ओली होइन । मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर । अनि ला’ज लाग्दैन भने मलाई भन । काम गर्न दिएनन् भन्छौ ? काम गर्न मन कहाँ छ ? तिमीलाई अलिकती पनि ला’ज लाग्दैन ?”
आदर्शले गत केहि सातादेखि यता युट्युब र फेसबुमार्फत बुवाको स्वा’स्थ्य अवस्था र उप’चार प्रक्रियाबारे निरन्तर अपडेट गराउँदै आएका थिए । आफ्नो नजिकको नातेदार मृ’गौ ला दा’नका लागि तयार हुँदाहुँदै पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नस्वी’कारेको बताएका छन् । भिडियो हे’र्नुहोस् :-